ဘီလာရုစ်မှာ အငြင်းပွားဖွယ် ရွေးကောက်ပွဲအလွန် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုများ အရှိန်ကောင်းနေ
လွတ်လပ်ရေးနဲ့ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံများ သံပြိုင်ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဘီလာရုစ်နိုင်ငံမှာ အငြင်းပွားဖွယ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ သမ္မတအလက်ဇန်ဒါလူကာရှန်ကိုက နောက်ထပ် သမ္မတသက်တမ်းအတွက် အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်နေခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေ အရှိန်အဟုန်ကောင်းနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယမန်နေ့ (ဩဂုတ် ၂၃ ရက်) က ဘီလာရုစ်မြို့တော် Minsk မြို့မှာ အတိုက်အခံ ထောက်ခံအားပေးသူတွေ ထောင်ပေါင်းများစွာ စုရုံးချီတက် ဆန္ဒပြပွဲခဲ့ကြပါတယ်။ သိန်းဂဏန်းအရေအတွက်ရှိနိုင်တဲ့ ဆန္ဒပြသူက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အများအပြား ဖြန့်ကျက်ချထားခဲ့ပေမဲ့ Minsk မြို့လယ်ရှိ လွတ်လပ်ရေးရင်ပြင် (Independence Square ) မှာ စုရုံးခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူတွေက သမ္မတလူကာရှန်ကိုဟာ ရွေးကောက်ပွဲကို မရိုးမသားလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုကြပြီး နုတ်ထွက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်သူအများအပြားက အတိုက်အခံအုပ်စုရဲ့ အနီနဲ့အဖြူရောင် အလံများကိုင်ဆောင်ထားပြီး လွတ်လပ်ရေးနဲ့ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ကြွေးကြော်သံများ သံပြိုင်ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်။
ယမန်နေ့ ဆန္ဒပြပွဲကို လူဦးရေ ၁၀၀,၀၀၀ ကျော် ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့ အချို့က ခန့်မှန်းပါတယ်။ သမ္မတလူကာရှန်ကိုကတော့ လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဆူပူအုံကြွမှုတွေကို ဖြိုခွင်းမယ်လို့ ကြုံးဝါးထားပြီး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံခြားအထောက်အပံ့ယူထားတဲ့ တော်လှန်ရေးသမားတွေကို ယခင်က အပြစ်ဖို့ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် လူကာရှန်ကိုက ရွေးကောက်ပွဲမှာ တရားမျှတစွာဖြင့် အနိုင်ရခဲ့ကြောင်းနဲ့ နောက်ထပ် ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ရန် ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ ဩဂုတ် ၂၂ ရက်နေ့မှာတော့ သမ္မတလူကာရှန်ကိုက NATO အုပ်စုဟာ အာဏာပိုင်တွေကို ဖြုတ်ချပြီး သမ္မတသစ်တင်ရန် ကြိုးစားနေကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။
(ဘီလာရုစ်သမ္မတ လူကာရှန်ကို) (Photo: EPA)
ဒါ့အပြင် ပိုလန်နဲ့ လစ်သူရေးနီးယားမှာ NATO တပ်ဖွဲ့များ ဖြန့်ကျက်မှုကို တုံ့ပြန်ရန် ဘီလာရုစ်တပ်ဖွဲ့တွေကို နိုင်ငံရဲ့ အနောက်ဘက်နယ်စပ်ဒေသများသို့ စေလွှတ်ထားခဲ့တယ်လို့လည်း သမ္မတလူကာရှန်ကိုက ပြောပါတယ်။ ဘီလာရုစ်မှာ လတ်တလော ပေါ်ပေါက်နေခဲ့တဲ့ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြမှုတွေကို ဖြိုးခွင်းခဲ့ရာ လူလေးဦးထက်မနည်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ အဖမ်းခံရတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကလည်း ထောင်ထဲမှာ နှိပ်စက်ခံရတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
(အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် Svetlana Tikhanovskaya) (Photo: BBC)
ဩဂုတ် ၉ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဘီလာရုစ်ရွေးကောက်ပွဲ တရားဝင် မဲရလဒ်တွေအရ ၂၆ နှစ်ကြာ အာဏာရရှိထားခဲ့သူ သမ္မတလူကာရှန်ကိုက ထောက်ခံမဲ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရရှိခဲ့ပြီး အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီး Svetlana Tikhanovskaya က ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘီလာရုစ်ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်တဲ့ စောင့်ကြည့်အဖွဲ့တွေ မရှိခဲ့ဘဲ မဲလိမ်လည်မှု များစွာရှိခဲ့ကြောင်း အတိုက်အခံဘက်က စွပ်စွဲထားပါတယ်။ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် Svetlana Tikhanovskaya ဟာ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး နောက်တစ်ရက်မှာ အိမ်နီးချင်း လစ်သူရေးနီးယားနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပြီး ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့အတူ အဆုံးအထိ ရပ်တည်သွားမယ်လို့ ပြောထားခဲ့ပါတယ်။
ဘီလာရုစ်ရဲ့ အခြေခံ အချက်အလက်အချို့
ဘီလာရုစ်က ဘယ်နေရာမှာလဲ? - ဘီလာရုစ်ရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ တောင်ဘက်မှာ ယူကရိန်းနိုင်ငံ တည်ရှိပါတယ်။ ဘီလာရုစ်ရဲ့ မြောက်ဘက်နဲ့ အနောက်ဘက်က ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ NATO အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ လတ်ဗီးယား၊ လစ်သူရေးနီးယားနဲ့ ပိုလန်တို့ ရှိပါတယ်။
ဘာကြောင့် အရေးပါနေတာလဲ? - ယူကရိန်းကဲ့သို့ပင် လူဦးရေ ၉.၅ သန်းရှိတဲ့ ဘီလာရုစ်ဟာ အနောက်အုပ်စုနဲ့ ရုရှားတို့ အားပြိုင်မှုကြားမှာ ရှိနေပါတယ်။ ရုရှားရဲ့ မဟာမိတ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဘီလာရုစ်သမ္မတ လူကာရှန်ကိုဟာ ဥရောပရဲ့ နောက်ဆုံးလက်ကျန် အာဏာရှင်လို့ နာမည်တပ်ခံရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ ၂၆ နှစ်ကြာ အာဏာရရှိထားခဲ့သူဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အများအပြားကို နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ထားပြီး အတိုက်အခံတွေအပေါ် ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို အသုံးပြုပြီး ဖိနှိပ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘီလာရုစ်မှာ ဘာဖြစ်နေလဲ? - ယခုအခါ အတိုက်အခံတွေရဲ့ ကြီးမားတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကြီး ပေါ်ပေါက်နေပြီး ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်သစ်နဲ့ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေပါတယ်။ သမ္မတလူကာရှန်ကိုရဲ့ ထောက်ခံသူတွေကတော့ ၎င်းရဲ့ တင်းမာတဲ့အုပ်ချုပ်မှုက နိုင်ငံကို တည်ငြိမ်ရန်ထိန်းထားခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။